'Krampus Iyo Naughty Kucheka' kuri Kuuya ku4K UHD Ingori Nguva yeKisimusi - iHorror
musha 4K UHD 'Krampus Iyo Naughty Kucheka' kuri Kuuya ku4K UHD Ingori Nguva yeKisimusi
'Krampus Iyo Naughty Kucheka' kuri Kuuya ku4K UHD Ingori Nguva yeKisimusi
by Trey Hilburn III September 14, 2021 1,073 maonero
Michael Dougherty's Christmas classic (ehe, iri) iri kuuya kune yakasarudzika edition 4k UHD munguva yeKisimusi. Ehe, izvo zvinoreva kuti iyi ndiyo vhezheni iyo Dougherty yaida kuti vateereri vaone asi yaionekwa seyakareba uye zvakare "yakashata" yeiyo studio. Nekudaro, ikozvino isu tichafanirwa kuve neyedu vhezheni iyi kunyatso kuve nechokwadi chekuti Santa anotiisa pane izvo zvakanyanya kutsvaga misikanzwa runyorwa.
Mutsara we Krampus Iyo Yakashata Yakatemwa inoenda seizvi:
Kana mhuri yake isingachabatsiri ichirwisana pazororo, Max mudiki akaodzwa mwoyo ndokufuratira Kisimusi. Zvishoma haazive, uku kushomeka kwemafaro mweya kwakaburitsa kutsamwa kwaKrampus: dhimoni dhimoni rekare rakaipa chinangwa chekuranga vasiri vatendi. Yese gehena inosununguka sezvidhori zvinodikanwa zvehoridhe zvinotora hupenyu hwakaipisisa hwavo, kukomba imba yemhuri yakatsemuka uye kuvamanikidza kuti varwire mumwe nemumwe kana vachitarisira kurarama.
Kunyanya, kubva pakuratidzira kuti isu tinoverenga izvi zvichave zvezviitiko zvekutaurirana. Asi, pamwe tichawana rimwe gore, asi ini ndinokahadzika. Chero zvazvingaitika, Krampus yakakura pandiri uye inotonga. Saka, ndinenge ndiri kutora kopi yemukomana akaipa uyu zvechokwadi.
Krampus Iyo Yakashata Yakatemwa inouya ku4K UHD kubva kuScream Factory kutanga Zvita 7. Unogona pre-odha kopi yako izvozvi pamusoro HERE. Kana iwe ukaraira vachiri ivo, uchagamuchira 18 x 24 Krampus poster neodha yako.
Wakanga uri fan of Krampus? Uchave uchitora here Akacheka Naughty? Tiudzei muchikamu chemashoko.